Madaxweynaha Puntland oo booqasho ku kala bixinaya qaar ka mid degmnooyinka maamulka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Puntland oo booqasho ku kala bixinaya qaar ka mid degmnooyinka maamulka
Qardho – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa maanta bilaabay booqasho uu ku tegayo qaar ka mid ah magaalooyinka hoostaga maamulkiisa, isagoo saaka tegay degmada Qardho ee gobolka Bari.
Wefdiga Madaxweyne Gaas oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa soo dhaweeyey dadweynaha magaalada Qardho oo watay gaadiid, fardo iyo geel.
Gaas oo khudbad ujeedinayay dadweynaha ayaa reer Qardho uga mahadceliyey soo dhoweynta wanaagsan ay u sameyeen, wuxuuna sheegay muddada uu magaalada jooga uu kulamo kala duwan la qaadan doona.
Wuxuu intaas ku daray in maamulka ay ka go’an tahay inuu qabato dhamaan waxyaabihii uu ballan qaaday, isagoo ugu yeeray mudaneyaasha Baarlamaanka in ay ka war hayaan deegaanada ay kasoo jeedaan oo aysan Garowe keliya iska fadhiyin haddii aysan shaqo jirin markaas.
“Ma ahaan markii koowaad ee aan idin imaado, mar walba soo dhoweyn iyo wanaag badan baan idin kala kulmayay, Shalay waxan idin imid anigoo musharax ah maanta waxaan idin yimid anigoo Madaxweynihii Puntland, shalay waxaan sameynay ballan qaadnay, maanta waxaad nooga fadhidaan in aan fulino ballan-qaadkii aan ballan qaadnay dadka reer Puntland fulintooda” ayuu yiri Gaas oo la hadlayey reer Qardho.
“Waxan idin ka ballan qaaday in shan sano ka bacdi Puntland wejiga maanta leedahay weji ka duwan yeelato, waxaa nalaga rabaa inagga in aan la imaano daacadnimo, dulqaad iyo midnimo.” ayuu u sheegay dadweynihii dhageysanayay.
Waxyaabaha uu ballan qaadey Gaas markii uu u tartamayey xilka madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxaa ka mid ahaa: Caddaalad, Hufnaan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, Haykal dowladnimo oo dhab ah in Puntland yeelato, Kor u qaadida wax soosaarka, Kaabayaasha dhaqaalaha dib loogu habeeyo iyo Horumar dhaqaale oo la taaban karo.
”Waxan balan qaadnay in dowladu aysan noqon dowlad ku kooban caasumadda,ay noqoto dowlad dhulkeeda iyo dadkeeda ka war qabta,mida kale waxan rajaynayaa xildhibaanadu inaysan Garowe fadhin in la tago dalka in laga war qabto dadka ay matalaan baahidooda oo ay lasoo joogaan” Gaas ayaa goob fageere ah ka sheegay maanta.
Gaas ayaa sidoo kala sheegay inay xooga saari doonaan mudada ay xafiiska joogaan sidii looga gudbi lahaa nidaamka qabiilka oo loo guuri lahaa sidii loo heli lahaa barnaamijka dimoqraadiyadda oo ah kan kaliya ee ay dadku wax ku dooran karaan.
Madaxweyne Gaas ayaa la filaaya in maalinimada berrito uu u gudbo magaalo ganacsiga ee Bosaaso, isagoo si kooban kusii hakan doona degaanada kale ku yaalla inta u dhaxeysa magaalooyinka Qardho iyo Bosaaso.
Waa socdaalkii ugu horeeyay tan iyo markii Cabdiwali la doortay uu ku tago magalada Qardho, lamana oga inuu tegi doono degmooyinka ay ku muransan yihiin maamullada Puntland iyo Somaliland sida degmada Laas-qoray ayaa maalmo ka hor oo si kedis ah ku booqday madaxweynaha Somaliland, Axmed Siilaanyo.
Wasiirro reer Somaliland ah oo oo ku dhaawacmay shil gaari & caaqil ku geriyooday
AU Special Representative commends Djibouti for its continued commitment to peace in Somalia